किन हुन्छ महिला र पुरुषको शर्टकाे बटन फरक साइडमा ? यस्ताे छ कारण
Tue, Nov 19, 2019 at 10:52am
मेडिकल शिक्षामा ठगी गर्ने सेनाको मेडिकल कलेजसहित ४ विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा #आहा खबर# शरद ऋतुको आरोहण : १२०० आरोही हिमालमा #आहा खबर# प्रतिपक्षी काँग्रेसले देखायो सरकारको २१ असफलता #आहा खबर# आलम प्रकरणमा कांग्रेसको जवाफ : 'कानूनबमोजिम हुने कुरामा सहयोग रहन्छ' #आहा खबर# नेपालको संविधानले मानवअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ : सभामुख भण्डारी #आहा खबर# अवतरण अभावका कारण प्याराग्लाइडिङ परीक्षणमा मात्रै सीमित #आहा खबर# फिफा विश्वकप एसियाली छनोट : कुवेतविरुद्धको खेलमा नेपालका यी खेलाडीहरु उत्रदैछन् मैदानमा #आहा खबर# ‘सेल्फी किङ्ग’मा विपिनको नँया अवतार #आहा खबर# जनता बैंकको दशौं साधारणसभा सम्पन्न, ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जरका लागि बाटो प्रशश्त #आहा खबर# सरकार ढिलो भएकै हो, अब विकासको लहर ल्याउँछ : प्रचण्ड #आहा खबर# ऋण लिनुअघि हेर्नुस्, कुन बैंकको आधार दर कति ? #आहा खबर# विद्यार्थी अमेरिका पठाउने मुलुकमध्ये १२ औँ स्थानमा नेपाल #आहा खबर# यस्ता छन् जाडोयाममा रातो तरकारी खानुका फाइदा #आहा खबर# मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे प्रचण्डको सचिवालयले निकाल्यो विज्ञप्ति #आहा खबर# उपनिर्वाचन २०७६ : उम्मेदवारसँगै शीर्षनेता भोट माग्दै घरदैलोमा #आहा खबर#
आईतवार, २२ आषाढ २०७६,	आहाखबर	1.85K
काठमाडाैं, २२ असार ।
तपाईँ विचार गर्नु भएकाे छ ? महिला र पुरूषकाे सटमा बटन फरक-फरक साइडमा हुन्छ । दैनिक जीवनमा यस्ता अनेकन कुरामा हामी ध्यान दिँदैनौं जुन कुराको ठूलो महत्व हुन सक्छ ।
के तपाईँलाई थाहा छ ? जिन्स प्यान्टको दाहिने पट्टि हुने सानो खल्ती केको लागि हो ? तपाइँले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ ? महिला र पुरुषले लगाउने शर्टमा बटन फरक साइडमा हुन्छ । केटीहरुले लगाउने शर्टको बायाँ साइडमा बटन हुन्छ भने पुरुषको शर्टमा दायाँ पट्टी ।
यस्ताे छ फरक-फरक साइडमा बटन राखिनुकाे कारण
त्यस्तै अर्को थ्योरी अनुसार पहिला पुरुषहरु दायाँ हातमा तरबार लिएर हिँड्थे र महिलाहरु बायाँ हातमा बच्चा बोकेर हिँड्थे । पुरुषलाई बटन बन्द गर्न वा खोल्नका लागि बायाँ हातको सहारा चाहिन्थ्यो त्यसकारण उनीहरुको शर्टमा दायाँ पट्टी बटन राख्न थालियो । तर महिलाहरुलाई हातमा बच्चा हुने हुँदा दायाँ हातले बटन खोल्नु पर्ने भएका कारण बायाँ पट्टी बटन राख्न थालियो ।